Home emeputa AHULTA HERON si MULTIPLEX Modellsport Video Test Report - Nkebi nke 2 Akụkọ ụgbọ elu na mkpọda
Video gara aga Okwu mmalite / mmeghe nke mmeri mmeri GERMAN CHAMPIONSHIP INTOR KUNSTFLUG F3P 2015
Video nke ozo YAK 130 VITALY ROBERTUS TEAM RUSSIA RC TURBINE JET Ọzụzụ ụgbọ elu (20KG) JET WM 2015
Na Jenụwarị 2015, na ụbọchị ntọhapụ, Modellpilot.EU nyere gị akụkụ mbụ nke akụkọ nyocha vidiyo zuru ezu na HERON site na MULTIPLEX Modellsport. Akụkụ nke abụọ na akụkọ ụgbọ elu dị ugbu a maka gị na mkpọda. Mgbatị ule gbatịrị agbatị na nnukwu ọkụ eletrik na-egosi foto magburu onwe ya na mkpọda ụlọ obibi Tannenalm alpine dị na Austria. N'ebe a, na Alps, HERON na-adọrọ mmasị site na iburu ọsọ ọsọ na ịnakwere thermals ahụ nke ọma. Site na T-ọdụ na arụmọrụ 4-flaapị dị elu, ụdị ELAPOR® gosipụtara arụmọrụ ụgbọ elu ya kachasị mma. Dị ka ọ dị na mbara ala dị larịị, HERON dị mma na mkpọda nwere obere ikuku. Lelee akụkọ nyocha 22 vidiyo zuru ezu HD na HERON si MULTIPLEX Modellsport. Nwee anụrị!
Retractable engine KTW Dr. Martin Thoma akụkọ nyocha vidiyo - aytọ eriri wiwi n'ụzọ ziri ezi
Tags 4-flaapu nkuelectricIgwe na-efegharị efegharịonye oru ugbo mmiri eletrikụgbọ eluụgbọ eluAkụkọ banyere ụgbọ eluLightsgbọ eluikowePegbọ elu eluHeronModelingModel na-efe efeFlightgbọ elu ụgbọ eluOnyeka OnwenuEgwuregwu ModelAHULTAAustriaRCakụkọngweNdị ọkwọ ụgbọ mmiriT-ọdụTannenalmuleNyochareviewsAKWESTKWỌ AHESTR.Video